आर्थिक गतिविधि – Page7– JanaSanchar.com
पोखराको हाम्रो जब नेपाल डटकमले रोजगार खोज्न सघाउने , त्यो पनि निःशुल्क
पोखरा, २३ कात्तिक के तपाईं जागिरको खोजिमा हुनुहुन्छ ? कि जागिर नपाएर भौतारिरहनु भएको छ ? यदी जागिर नपाएर भौतारिरहनु भएको छ वा तपाईं जागिरको खोजिमा हुनुहुन्छ भने अब चिन्ता नलिनुस् । तपाईंलाई पोखराको हाम्रो जब नेपाल डटकमले रोजगार खोज्न सघाउने भएको छ । त्यो पनि निःशुल्क । पोखराको बुद्धचोकमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको यस संस्थाले नेपालका..
आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा सवा अर्ब घोटाला
नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिदमा कम्तीमा १ अर्ब २६ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको अनियमितता भएको भेटिएको छ । निगमले झापा, सर्लाही, चितवन र रूपन्देहीमा गरेको जग्गा खरिदका क्रममा तयार भएको फाइल अध्ययन गर्दा जग्गा दलाल प्रयोग गरी प्रचलित मूल्यको तुलनामा महँगोमा खरिद गरेको पुष्टि भएको छ । यथार्थपरक अनुसन्धान हुने हो भने अनियमितताको आकार २ अर्बभन्दा..
जुम्ला - एक सातायता जिल्लामा रु दुई करोड २५ लाख बराबरको स्याउ बिक्री भएको छ । यतिबेला यहाँका व्यापारीले बिक्रीका लागि स्याउ अन्य जिल्ला पठाउन थालेका छन् । अहिलेसम्म जिल्लाबाट ५४२ मेट्रिक टन स्याउ विभिन्न जिल्ला पठाइएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ । व्यापारीले किसानको बगैँचामै गएर स्याउ प्रतिकिलो रु ६० का दरले खरिद गर्न..
२ भदौ, हेटौँडा । हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रमा बाढी पस्दा रु एक अर्ब ७७ करोडको नोक्सानी भएको छ । यहाँका आठवटा उद्योगमा रु दुई करोड ५० लाखभन्दा बढीको भौतिक क्षति भएको छ । उद्योग व्यवस्थापन कार्यालय हेटौंडा र उद्योग सङ्घ मकवानपुरले संयुक्त रुपमा गरेको निरीक्षणका क्रममा सो परिमाणमा नोक्सानी भएको भेटिएको हो । “यो त न्यूनतम क्षति विवरण मात्र..